Ciidamada Itoobiya Oo Magaalada Xudur Ku Rasaaseyay Diyaarad Khaad Sidday.
Sunday October 08, 2017 - 07:29:36 in Wararka by Super Admin
Warar is khilaafsan ayaa kasoo baxaya diyaarad shalay ku dhacday mid kamida xaaafadaha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Diyaaradda oo maandooriyaha khaatka kasoo qaadday gudaha wadanka Kenya ayaa si lama filaan ah ucaga dhigatay garoonka diyaaradaha Macmalka Xudur oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Gumeysiga Kenya.
Sida ay sheegeen saraakiisha maamulka Koonfur galbeed diyaaradda ayaa Khaad usidday dhanka magaalada Ceelbarde balse saraakiil katirsan Melleteriga DF-ka oo ku sugan Xudur ayaa codsaday in dhowr Bundad oo khaat ah loo dajiyo.
Diyaaradda ayaa markii ay soo caga dhigatay garoonka waxay si kedis ah ku dajisay ugu yaraan laba jawaab oo khaat ah kadibna waxay isku dayday in ay ku oroddo dhabaha diyaaradahu ku ordaan, daqiiqado kadib ciidanka Itoobiya ayaa rasaas ku furay waxayna ka toogteen dhanka lugaha.
diyaaradda ayaa markii ay kacday ku dhacday meel garoonka ka baxsan oo dad shacab ah deganyihiin balse lamasoo sheegin khasaaraha soo gaaray shaqaalaha diyaaradda, wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada itoobiya ay gacanta ku dhigeen duuliyihii diyaaradda iyo shaqaalihii kale ee la socday kuwaas oo ka dhega adeygay amarkii ay bixiyeen saraakiisha Xabashida.
Maamulka degmada Xudur ayaa maalmo ka hor mamnuucay in maandooriyaha Khaatka lagasoo dajiyo Xudur wuxuuna sabab uga dhigay maleeshiyaadka oo awoodi waayay in ay iska caabiyaan weerarada uga imanaya ciidamada Xarakada Al Shabaab.
Sarkaal Katirsan DFS Oo Lagu Toogtay Magaalada Baladweyne